Goos Gooska Race 3 Iyo 6 Muuqaal Ugu Layaabka Badan Ee Internet-ka Gil Gilayaan!! – Filimside.net
Waxaa si rasmi ah galabkaan loo soo bandhigay goos gooska filmak Race 3 ee lawada sugaayey sido kalena waqti xaadirkaan gil gilaayo barta Youtube-ka.
Race 3 waa film madadaalo dhamestiran leh oo uu hogaamiye ka yahay Mega Star Salman Khan, waxaad hilmaami doonta Tiger Zinda Hai ee dhamaadkii sanadkii hore la daawaday misane Action heer sare ah uu jilaagan kusoo bandhigay balse mucjisada uu Race 3 Sallu kula yimid waa wax in badan lala yaabi doono.
Goos Gooska mashruucan ayaa Internetka gil gilaayo ayadoo daawashadiisa dadka ku mashquulsanyihiin kaliya Salman ma ahan ee jilaa walbo ee goos gooskan kasoo muuqday saameyn balaaran ayuu filmka ku leeyahay sida laga fahmi karo.
Bobby Deol wuu soo laabtay waxuuna Sallu kula tartami doona shaashada ciidaan ayadoo Anil xarakaad heer sare ah la yimid asna dhanka kale hablaha Jacqueline Fernandez iyo Daisy Shah dagaalkoda shaashada waa wax in badan kusoo jiidan doono.
Hadaba waxaa la isku keenay 6 muuqaal oo laga soo dhex saaray goos gooska filmkaan la daawan doono ciidul fidriga sido kalena waa 6 muuqaal kuwaaso ugu cajiibsan goos gooska fadlan halkaan hoose kaga bogo